महामारी बिरुद्ध साझा सङ्कल्प गरौँ – Sthaniya Patra
महामारी बिरुद्ध साझा सङ्कल्प गरौँ
By स्थानीय पत्र	 Last updated Aug 14, 2020
अत्याउन खोजेको नबुझिदिनु होला। तर्साउन खोजेको पनि होइन। सत्य तितो हुन्छ, सुन्नलाई ठुलै हिम्मत चाहिन्छ। जसले जे जे भनेपनि कोरोना सजिलै जाने देखिएन। मेडिकल अनुसन्धानमा महारथ हासिल गरेका भनिएका सबै देशले हार खाइसके।
अमेरिका जस्तो देश एउटा सामान्य औषधिको लागि इन्डियासँग धम्कीपूर्ण याचना गर्न बाध्य भयो। चीनको अथक प्रयासलाई पनि पटक पटक दोहोरिएर कोरोनाले हेपेको हेपेकै छ ! नेपाल जस्तो निम्छरो देशको कुरै नगरौं। लाग्छ, एकपटक पुरै समुदाय सक्रमित हुने छ। कति मर्ने कति बाँच्ने भन्ने कुरा पनि अज्ञात नै देखिन्छ। जोगिने आफैं हो, जोगाउने पनि आफैंले नै हो। थुनिएर बस्दा जितिन्छ, स्वतन्त्रता रोजे सकिइन्छ भन्ने कुरा पनि भरपर्दो छैन। कहिलेसम्म थुनिएर बस्दा जित हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्नेहरूलाई नै थाहा छैन । अस्पताल सुनसान हुँदै छन्। बजार पनि ठप्प जस्तै देखिन थालेको छ। यस्तो बेलापनि राजनीति चाहिँ पुरै तातेको छ। जनता नै सिद्धिए भने भोलि भोट कोसँग माग्ने हो ?
हिजो राजतन्त्र फाल्दा सबै दल र समूहहरू एउटै मोर्चामा थिए। जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन टाउकोमा कात्रो बेरेर निस्किएको भन्थे। के देश र जनताको लागि कोरोनाभन्दा राजतन्त्र घातक थियो र ? आज सिङ्गै देशलाई आतंकको तुवाँलोले छोपिसकेको छ। यो बेला सबै दल र समूहहरू एउटै धारमा, एउटै मोर्चामा, एउटै नीतिमा जोडिनुपर्छ। बाँचियो भने फेरि कांग्रेस, नेकपा, समाजवादी, हिन्दू, मुस्लिम, इसाई जे जे हुनुछ भएरै छोडौँला। एकाअर्कालाई सत्तोसराप पनि गरौंला। चुनावमा दुई तीहाइ पनि ल्याउँला। तर आज मानवता नै सङ्कटमा परेको छ। कति हजार, कति लाख जनता सोत्तर हुने हुन् ? अनुमान गर्न पनि डरलाग्दो देखिएको छ।
यस्तो आततायी अवस्था मानव इतिहासकै दारुण दृश्य बनिरहेको छ। कल्पना नै गर्न नसकिने जनधनको क्षति हुनलागेको विषम परिस्थितिमा आउनु होस् एउटा सङ्कल्प गरौं। म निश्चित समयका लागि वाद र सिद्धान्त छोडिदिन्छु। तपाईं पनि स्वार्थको दलदलबाट बाहिर निस्किनु होस्।
सारा देश भयक्रान्त भएको बेला तपाईं पनि मन्त्री-प्रधानमन्त्री नबन्नु होस्। म पनि पक्ष-प्रतिपक्ष र विद्रोही बन्दिन! एकपटक फेरि तपाईं र म मिलेर हामी बनौं। जनताको रोदनलाई अलिकति भए पनि कम गर्नुछ! आउनु होस् फेरि एकपटक हातेमालो गरौं। म पनि तपाईं जस्तै नेपाली बन्छु अनि तपाईं पनि म जस्तै नेपाली बन्नु होस्।
असोज–कात्तिकमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउनसक्ने, सरकार भन्छः २…
संक्रमित र समाज